Fomba ahazoana lanja amin'ny fomba mahasalama sy mahomby amin'ny alàlan'ny fanatanjahantena sy sakafo mahavelona | Nutri Diet
Fomba ahazoana lanja amin'ny fomba mahasalama sy mahomby
PaÃ¼ Heidemeyer | | soso-kevitra, sakafo
Tsy ny olona mikatsaka ny lanja fotsiny, ny lanja sy ny habetsaky ny volantsika no hitantsika fa ny isan-jato ambany fa mitovy ihany mitady fomba hahazoana lanja amin'ny fomba mahomby sy mahasalama.
Around ny roa ampahatelon'ny mponina dia be loatra na matavy loatraNa izany aza, amin'ity indray mitoraka ity dia hifantoka amin'ireo rehetra izay mikatsaka lanja isika mba hitazomana lanja ara-pahasalamana ihany koa.
Mitera-doza toy izany koa ny ambonimbony amin'ny lanja naroso arakaraka ny halavantsika, ny taonantsika ary ny endritsika ary ambany noho io lanja nomen'ny matihanina io.
Raha mitady hanana lanja soa aman-tsara ianao, dia avereno vakio ireto andalana ireto hahafantaranao ny lakile rehetra ilaina hahatratrarana azy.
1 Fomba ahazoana matavy haingana sy mahasalama
1.1 Lakile hitadidy ao an-tsaina
2 Fomba ahazoana tongotra matavy
2.1 Fanatanjahan-tena hanamafisana ny tongotra sy hampatavy azy ireo
3 Sakafo hahazoana lanja mandritra ny iray volana
3.1 Sakafo hahazoana 10 kilao ao anatin'ny iray volana
3.1.5 sakafo hariva
3.2 Sakafo ahazoana lanja mahasalama
4 Azo atao ve ny mahazo lanja be ao anatin'ny fotoana fohy?
Fomba ahazoana matavy haingana sy mahasalama
Ny zava-dehibe raha ny fahazoana lanja dia ny fanaovana azy amin'ny fahatsiarovan-tena, miadana ary miaraka amina fiheverana manan-danja ny zavatra ataonao.
Na dia toa mora matavy aza, mila manana fahalalana fototra momba ny sakafo ianao raha ny sanda ara-tsakafo mba hisorohana ny tsy fahampiana ary tsy fanararaotana ny tavy sy ny siramamy izay rehefa ela ny ela dia tena manimba ny vatana.
Raha tsy ampy lanja ianao tsy maintsy mahazo tavy hozatra ianao ary tavy matanjaka sy mahasalama. Tsy mila matavy ianao ary manana tavy amin'ny kibo izay tsy manampy anao hanana fahasalamana tsara kokoa.
Mahita olona maro miaraka amin'ny fiarahamonina isika diabeta karazana 2 izay tsy matavy loatra, mijaly amin'ny aretim-po noho ny fihazonana sakafo tsy mampidi-doza.
Lakile hitadidy ao an-tsaina
Mihinana kaloria bebe kokoa izay ilain'ny vatana.
Mihinana kaloria fanampiny 500 ka hatramin'ny 700 isan'andro isan'andro hahazoana lanja haingana, na mihinana kaloria 300 fanampiny raha mitady hanao azy miadana kokoa ianao.
Mihinana vondrona sakafo mahasalama, proteinina, gliosida ary tavy mahasalama.
Mizara tsara ny sakafony isan'andro izy ary mampiditra ireo vondrona sakafo rehetra.
Fomba ahazoana tongotra matavy
Amin'ny tranga maro dia mitady hanatavy ny tongony mahia ny olona ary hihazona ny fatiny ho mahia sy ho matanjaka. Ilaina ny fihazonana sakafo tsara hahatratrarana izany.
Ireto ny sakafo lehibe hampatavy ny tongotrao.
Flour: sakamalaho, voasarimakirana, mofo misy serealy sy masomboly.
menaka: oliva sy canola.
ambioka: tanamasoandro, sesame, rongony.
voanjo: voanjo, amandy, cashews, hazely.
Fanampiny hahazoana lanja: menaka trondro, proteinina whey, masirasira avy amin'ny labiera, créine.
Fanatanjahan-tena hanamafisana ny tongotra sy hampatavy azy ireo
Zava-dehibe ny fikolokoloana ny sakafo sy ny fampitomboana ireo vondrona sakafo sasany, tsy maintsy ataontsika manao fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena izany dia mitazona hozatra matanjaka ka mitombo habe.
Squats: Izy io dia iray amin'ireo fampihetseham-batana azo ampiharina sy mahomby ary tsotra indrindra. Tsy hampitombo ny hozatry ny tongotra fotsiny ianao fa hahazo vodiny matanjaka koa.
Miorina amin'ny fanoherana: Ny masinina elliptika miaraka amin'ny fanoherana sasany dia hanampy anao hanatsara ny hatevin'ny tongotrao.
Fanatanjahan-tena mahery: mitady fanazaran-tena izay miasa kokoa ny tongotra.
Zava-dehibe ny fanatanjahantena atao amin'ny fomba voafehy sy miaraka amin'ny fanaraha-mason'ny matihanina. Atambatra fitsaharana tsara amin'ny sakafo manokana sy fanazaran-tena mifanaraka amin'ny taonanao sy ny toe-batanao.
Sakafo hahazoana lanja mandritra ny iray volana
Tsy mila mampitombo ny sakafo fantatsika fa mihamatavy isika, mila mihinana kaloria, kaloria ary sakafo mahasalama bebe kokoa.
Mihinana proteinina bebe kokoa. Raha te hampitombo ny hozatra ianao, dia ilaina ny proteinina ho an'ny legioma sy ny biby. Atody, vokatra vita amin'ny ronono, voanjo, hena, trondro ary dibera.
Karbohidraty sy tavy.
Mihinana sakafo telo lehibe isan'andro ary mihinana sakafo maivana kaloria be. Toy ny voanjo, zavokà na akondro.
Halaviro ny sakafo voahodina ary andrahoy izay hohaninao. Mila matavy ianao amin'ny fahasalamana.
Sakafo hahazoana 10 kilao ao anatin'ny iray volana
Ity misy ohatra iray amin'ny fihinanana sakafo izay afaka manatanteraka mandritra ny iray volana ianao hahazoana lanja soa aman-tsara sy mahomby.
Fromazy vaovao miaraka amin'ny tantely.
Kafe misy ronono manontolo.
Vera feno ronono.
Tanana voanjo sy voankazo iray.
Fisorohana proteinina amin'ny endrika hena na trondro. 250 grama.
Karbôna, vary na paty.
Oaka 50 grama.
Hena akoho na akoho amam-borona 300 grama.
Voaravaka menaka oliva.
Sakafo ahazoana lanja mahasalama
Raha mitady hahazo lanja ianao dia ampitomboy ny fihinanana ireo sakafo ireo mba hahazoana azy mora foana, avelanay ianao lisitr'ireo vondrona tsara indrindra ampidirina amin'ny sakafo.
Ronono iray manontolo, yaorta, fromazy, dibera.
Menaka oliva fanampiny, menaka voanio.
Akoho amam-borona, henan'omby, zanak'ondry na henan-kisoa.
Azo atao ve ny mahazo lanja be ao anatin'ny fotoana fohy?
Raha tsy zatra mihinana sakafo be dia be ianao, ampitomboy kely ny sakafonao kelikely satria raha tsy izany dia mety ho voky ny vatanao ka hiteraka fahavoazana amin'ny tsinay.
Amin'ny lafiny iray, aza manararaotra zava-pisotro misy alikaola, satria na eo aza ny tsy fahampian'ny kaloria dia mahatonga anay hampitombo ny metabolisma sy ny tosidra ary mety hampihena anao aza.
Ny vatan'olombelona dia milina saika tonga lafatra, Tsy tokony hanery azy io isika na hanery ny tenantsika. Manoro hevitra anao izahay hankanesana any amin'ny endocrinologist mba hitarika anao amin'ny tanjonao hahazo lanja hahatrarana azy amin'ny fomba mandaitra.
Mahita sakafo an-jatony isika izay manampy antsika hahazo lanja, saingy tsy ny rehetra no mahafeno ny fepetra takiana mba hahasalama azy ireo.
Tsy tokony hatao ny mahazo be ao anatin'ny fotoana fohy satria mila fotoana na fe-potoana fampifanarahana ny vatana. Misy fetrany ny vatana ary tsy azontsika atao ny manararaotra azy. Ho fanampin'izany, lakilen'ny fijerena ny sakafonao sy ny fihinanana vokatra misy kaloria nefa mahasalama.
Ho fanampin'izany, ny fahazoana lanja "ratsy" dia mety hahatonga ny vatantsika ho ratsy tarehy sy tsy lamaody. Raha iray ianao olona manify sy bitika tokoa Mitadiava refy mifanaraka amin'ny vatanao sy ny tarehinao.
Mankanesa any amin'ny endocrinologist foana raha hitanao fa ilaina izany satria zava-dehibe ihany koa ny mitady sakafo sahaza sy mahasalama hahafoana lanja toy ny sakafo mahazo lanja tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Fomba ahazoana lanja amin'ny fomba mahasalama sy mahomby
Angano momba ny sakafo
Sakafo fanalan-jaza hialana raha bevohoka ianao